Meghan မော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
'' သူက s ကို ** t ကိုယူ! ' တော်ဝင်ပရိသတ်များကဖိလိပ္ပုအား Meghan နှင့် Harry တို့ထံမှထွက်ခွာခြင်းအတွက်ချီးမွမ်းသည်
ဒါကြောင့် Archewell ပါ! မင်းသားဟယ်ရီကသူနှင့် Meghan Markle တို့၏“ အလုပ်သစ်” ကိုရှင်းပြသည်။
Meghan Markle က 'ကြွက်အဆိပ်' ဖြစ်လာတာနဲ့အမျှတရားစွဲဆိုမှုမှထွက်ခွာရန်ပြောခဲ့သည်။
Meghan Markle သည်တောင်အာဖရိကခရီးစဉ်တွင်သူမအနေဖြင့်အဆင်မပြေရသည့်အကြောင်းရင်းကိုပြောပြသည်
Meghan Markle ကသူသည် '' ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်အရှိဆုံးသူအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသူ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် '' ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ဂျနီဖာ Hauser အားဖြင့်။ | CNN မှ Sussex မှ Duchess မှဆယ်ကျော်သက် Podcast တခုကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်လှည့်စားနေခြင်းနှင့်သူမမည်သို့ရုန်းကန်ခဲ့ရသည်ကိုပြောပြခဲ့သည်။
မင်းသားဟယ်ရီနှင့်မက်ဟန်းမာ့ခ်တို့သည်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသည့်ဗွီဒီယိုတွင်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသည့်ကလေးငယ် Archi ၏ပထမ ဦး ဆုံးအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်
var brightcoveBrandsafety = '4 အားကစားနှင့်အထူးကုသတင်းများ - ကြော်ငြာကိုပစ်မှတ်ထားပြီးပါပြီ' ယခုအခမဲ့စာရင်းသွင်းပါ၊ ထိပ်ဆုံးတော် ၀ င်ပုံပြင်များကိုဘယ်တော့မှမလွတ်ပါ။ ပေးသွင်းရန်မမှန်ကန်သောအီးမေးလ်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုသင်ပို့ခြင်းအတွက်သာအသုံးပြုလိမ့်မည်။
Tele RELAY တစ်ခု အောက်တိုဘာ 7, 2020 0
မင်းသားဝီလျံ vs. Meghan Markle အားလုံး - စာအုပ် - လူတွေ
Tele RELAY တစ်ခု အောက်တိုဘာ 5, 2020 0
မင်းသားဟယ်ရီသည် Meghan Markle နှင့်စတင်တွေ့ဆုံသောအခါမင်းသားဝီလျံသည်အလျင်အမြန်ရွေ့မသွားရန်အကြံပေးခဲ့သည်။ ဟယ်ရီသည် ပက်သက်၍ ကြီးပြင်းလာပြီးအမေရိကန်ရုပ်မြင်သံကြားမင်းသမီးနှင့်သူ၏အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုဘရိတ်အုပ်ရန်ငြင်းဆန်သည့်အခါဝီလျံသည်ချားလ်စ်အားမေးမြန်းခဲ့သည်။